Elon Yunivhesiti Yekugamuchira Mwero uye Maitiro Ekupinda Zviri Nyore | xScholarship
Yakanyatsobhadharwa PhD Scholarship mu2022
Elon Yunivhesiti Yekugamuchira Mwero uye Maitiro Ekupinda Zviri Nyore
Elon University's yakazara yekugamuchirwa mwero inofungidzirwa kuve 78.4%. Uri kutsvaga yunivhesiti inopa vadzidzi vayo mikana yakawanda, kuvaka hunhu hwehutungamiriri, pfungwa yekuve munhu uye kuita, kubatana nevanhu, kuwana zvinoshamisa madhiri, vanokatyamadza vashandirwi, uye kuva nenguva yakanaka?
Ipapo kutsvaga kwako kunopera.
Elon University ndiyo mhinduro kumibvunzo iri pamusoro. PaElon University, Kofi itsika yevhiki nevhiki yekampasi umo vadzidzisi, manejimendi, uye vadzidzi vanoungana kuti vawane kofi nemakeke pa-campus coffeehouse Chipiri chega chega (US News uye World Report)
Elon University inoita kunge inzvimbo inonakidza yekufunda. Inopa vanopedza kudzidza uye undergraduate zvidzidzo kuvadzidzi vane shungu dzeakasiyana makosi anozovagadzirira mabasa akasiyana siyana. Inopa zviitwa zvezvido zvemunhu wese pamwe nemikana yebasa kune avo vanoda. Elon University inopa dzakasiyana siyana scholarships uye rubatsiro rwemari kuvadzidzi vakafanirwa.
Chinyorwa ichi chinokupa iwe maonero nezve Elon University, Elon University GPA Zvinodiwa, Elon University SAT zvinodiwa, Elon University SAT mutemo, Elon University ACT mamakisi anodiwa, Elon University Admission process, Elon University Tuition Fee, uye zvese zvaunoda kuti uzive nezvaElon. Yunivhesiti.
Edza kutarisa UCSF Medical Chikoro Kugamuchirwa Mwero, Chinzvimbo, uye Scholarship
Nezve Elon University
Elon yunivhesiti yunivhesiti yakakurumbira muNorth Carolina.
Elon University inzvimbo yakazvimiririra yechiKristu iri kunze kweElon, North Carolina. Elon University yakavambwa muna 1889 uye parizvino inodada nemudzidzi wevadzidzi vanosvika zviuru zvinomwe nemazana manomwe nenomwe, izvo zvinosanganisira zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri.
Elon's epamusoro akajairika majors ndeaya Humanities uye Technologies, Commerce, uye Communication systems. Hutano 12-ku-1 mudzidzi-kune-faculty chikamu chinobatsirawo dzidzo muchikoro.
Vadzidzi vanogona kuronga masangano echiGiriki, mitambo yekirabhu, uye yemitambo yemitambo ensembles, pamwe nedzimwe nzanga, uye mapoka. Elon zvakare anotora chikamu muNCAA Union.
Elon University inogona kugara kusvika ku4,096 vadzidzi. Chikamu chikuru chevadzidzi chinogara pamusasa, nepo vadzidzi vekutanga vachifanirwa kudaro. NeMugovera, vanenge 75% yevadzidzi vanoramba vari pamusasa.
Sekukosheswa kwemusika, hwaro hweElon University hwaikosha $259.167 miriyoni muna 2021. Yunivhesiti inoisa mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere neshanu emadhora pamudzidzi wenguva yakazara akanyoreswa. Wese akazadzwa nhengo yefaculty paElon University ine vangangosvika gumi nevatatu vadzidzi vepasiriduate.
Elon University inoita seinopa makumi mapfumbamwe nematatu echitupa makosi pa undergraduate, vakapedza kudzidza, uye doctorate mazinga. Iyo Media Relations, Marketing, uye Inoshanda Journalism chirongwa vakapedza zvidzidzo zana nemakumi mashanu nevatatu gore rakapera, uye bazi reFinance rakapasa 153.
Pakati peminda mikuru ine mukurumbira paElon University masevhisi emari, Ruzhinji, Kutaura Kukurukurirana uye Hyperbole, Branding Strategic kuronga, General, Cognitive sainzi, Bhizinesi General manejimendi, Ruzhinji, General Dzidzo Services uye Kufambira mberi, Mari yekubika, Political Science uye Hurumende, General, International/Globalization Research, uye Radio neTerevhizheni. Uyezve, avhareji yenguva yekuchengeta vanhu i90%, zvichiratidza kuti vadzidzi vanofara.
Chii chinonzi Elon University Kugamuchirwa Rate?
Elon University's yakazara yekugamuchirwa mwero inofungidzirwa kuve 78.4 % muna Fall 2020, paine zvinopfuura zviuru gumi nemazana mashanu zvikumbiro zvakatambirwa. Aya data anosanganisira vese vari mu-state uye kunze-kwe-state vamiriri. Isu pari zvino tinenge tisina zviverengero pamatengo ekugamuchirwa kwemitengo.
Ungadawo kutarisa Chiyero chekugamuchirwa kuStanford: Maitiro ekugamuchirwa zviri nyore
Chii chinonzi Elon University GPA Chinodiwa?
Iyo yakawedzera GPA paElon University ndeye 4.0. Nekuda kweizvozvo, unofanirwa kunge uri wepamusoro pekirasi yako paElon University ine GPA ye4.
Vadzidzi Vanoda kunyorera kuElon University vanofanirwa kuve nemaA mune zvese zvidzidzo zvavo kuti varwe nevamwe vanokwikwidza. Pamusoro pezvo, kuratidza kuti vadzidzi vepachikoro vakatwasuka nekutora makosi anodiwa senge AP kana IB makirasi anogona kubatsira. Kana uri junior kana mukuru, unofanira kuendesa mafomu ekukoreji. Kuti ugadzire yakaderera yakazara GPA pane chikumbaridzo chechikoro che4, iwe uchada yakakwira SAT kana ACT mamaki. Izvi zvinokutendera kuti unyatso kukwikwidza kurwisa vanhu vane maGPA akakwira. Elon University inosarudza zvakanyanya, sezvinoratidzwa neavhareji GPA iyi; vanyoreri vepamusoro kubva kutenderera pasirese vakambonyorera vaine tarisiro yekugamuchirwa, uye iwe unofanirwa kuvapfuura.
DZIMAI TARISA: Kudzidza paChristopher Newport University 2022: Kudzidza, Kudzidza, Mari Yekurarama & Kugamuchirwa Mwero
Elon University idambudziko kana GPA yako yakaderera pane 3.98 yakazara. Elon University, kune rimwe divi, inotarisa kunyoreswa kwakazara, uye isu tinokwanisa kudzikamisa GPA yakashata nekufunga zvatichakurukura pazasi. Iwe uri mune yekufara svikiro kana yako cumulative GPA iri 3.98 kana nani.
Try checking Chiyero chekugamuchira paMIT: Maitiro ekugamuchirwa zviri nyore
Kuti upinde muElon University, ndeipi SAT mamaki yaunoda?
A baseline SAT mamakisi e1238 mune 1600-mapoinzi renji inodiwa kuti ubvume kuElon University. Elon University's median SAT mamakisi ndeye 1190 makiredhiti.
Kana iwe uchida kugamuchirwa kuElon University, yako SAT mamakisi inofanira kunge iri padyo nechiyero chenyika. Kana chibodzwa chako chiri pedyo ne1100, hapana mubvunzo kuti uchave nenguva yakaoma kupihwa mvumo. Kuti unzi "chinangwa," iwe unofanirwa kuva nechibodzwa che1280
Panyaya yehumbowo hwakakura hwemabhuku uye chikamu chekuumbwa, makumi mashanu muzana evavhoti vakabvumidzwa kuna Elon vakaita pakati pe50 ne590, ne660% vachitambira pasi pe25 uye 590% vakahwina pamusoro pe25.
Pachikamu chesvomhu, inopfuura hafu yevanyoreri vanokwanisa vakawana kubva pa570 ne660, ne25% vachiwana ari pasi pe570 uye 25% vachiwana anopfuura mazana matanhatu nemakumi matanhatu.
Elon University SAT mutemo
Elon University's giredhi sarudzo sarudzo inowanikwa muchikamu chikuru. Izvi zvinonzi "mega rating." Izvi zvinoreva kuti une masimba akazara pamusoro peSAT bvunzo dzaunoendesa kusangano. Kubva pane ese ari maviri eSAT nguva dzaunopa; vaongorori vako vekunyoresa vanozotora mukunongedzera yako yepamusoro chikamu chikamu.
Nekuda kweizvozvo, kana yako SAT yepamusoro mamakisi iri pasi pe1150, iwe unofanirwa kuongorora zvakasimba kutora bvunzo zvakare. Iwe une mukana wakanaka wekusimudza chibodzwa chako uye kuwana kugamuchirwa.
Tarisa NYU Steinhardt's Kugamuchirwa Mwero, Tuition, uye Scholarships
Chii chinonzi Elon University ACT mamakisi Chinodiwa?
Elon University ine ACT zvibodzwa makumi maviri nenomwe. Chibodzwa cheACT cheElon University chinochiisa muboka Rine Kunetsa. Kunyangwe Elon University inofanirwa kuratidza kuti kana iwe ukaendesa uine makumi maviri neshanu kana mashoma, hapana baseline ACT mamaki anodiwa.
Kana uchitumira ACT zvibodzwa kumasangano, ramba uchifunga kuti une hutongi hwese pamusoro pebvunzo dzaunoendesa. Tora mabasa gumi uye upe iro rine zvibodzwa zvakanakisa. Kunyangwe iyo SAT, inoda kuti iwe uendese ako ese ekare bvunzo, mazhinji masangano haaendese ako ese ekare.
Zvinoenderana nenhamba idzi, vazhinji vevadzidzi vakabvumidzwa naElon vaive neACT mamakisi epamusoro 22% munyika. Uyezve, pakati pe50% yevaElon vakanyorera vakagamuchira ACT inoumbwa mamakisi makumi maviri neshanu kusvika makumi matatu, ine 25% chiyero pamusoro pemakumi matatu uye 30% kuverenga pazasi makumi maviri neshanu.
DZIMAI TARISA: Fuqua Chikoro cheBhizinesi [Ongororo]
Elon University haidi iyo ACT chinyorwa chikamu. Kunyangwe mamwe mayunivhesiti mazhinji, Elon University inoona yako yepamusoro sub kubva isingaverengeke ACT zvikamu.
zvisinei, mazhinji emayunivhesiti haadi yakakwana ACT mhedzisiro. Chikoro chinosanganisa chako chikuru mhedzisiro kubva pamazuva ese ebvunzo kuti uwane iyo yepamusoro inogoneka inosanganisirwa mamakisi. Sechikonzero, mayunivhesiti mazhinji anongotora yako yepamusoro ACT kuita kubva panguva imwe uchifunga.
Verenga zvakare chinyorwa ichi nezve Chiyero chekugamuchirwa kuBoston University: Maitiro ekugamuchirwa zviri nyore
Chii chinonzi Elon University Admission process?
PaElon University, ine 72 muzana yekubvumidzwa reshiyo uye 67.6 muzana yekutanga kubvumidzwa mwero, Elon University yekubvuma yakaomesesa. Elon University inogamuchira makumi mashanu muzana evanyoreri vayo vane SAT mamaki pakati pe50 ne1140 kana ACT mamakisi ari pakati pemakumi maviri neshanu ne1320.
Zvakadaro, mumwe wevakanyorera vakasarudzwa akawana mibairo yakakura kupfuura miganhu yakatarwa, nepo hafu yakasara yakawana mhinduro dzaive pazasi. Elon University ine $60 yekubhadhara mari yekunyoresa pamwe ne10 Ndira yakafanira.
Elon University ine yakaomesesa yekubvuma maitiro ayo anoongorora huwandu hwezvinhu mukuwedzera kune gpa uye bvunzo mhinduro. Kubatanidzwa mune zvakakodzera zviitiko zvekunze, chirongwa chakasimba chedzidzo, chinyorwa chekunyorera chakasimba, uye tsamba yakasimba yereferensi zvese zvinogona kukubatsira iwe kusarudzika.
Iwe unogona zvakare kutarisa UC Davis Yekugamuchira Mwero uye Maitiro Ekupinda Zviri Nyore
Elon University Admission Procedure yeVadzidzi-Gore Rekutanga.
Elon University yegore rekutanga undergraduate kosi ine online kunyoreswa. Iwe unozoda kadhi rechikwereti kuti unyore chero iwe wakagamuchira waiver yemubhadharo. Maitiro ekubvumidzwa paElon University akaomarara. Vanoda kusvika 17,000 vapinda vakatumirwa kune 1,745 nzvimbo dzekirasi yegore rekutanga.
Izvi zvinotevera zvinodiwa zvekubvumidzwa kune undergraduate kuElon;
Vadzidzi vanofanirwa kuendesa yavo yakazadzikiswa uye isingadzoserwe muripo wekubhadhara mari yekunyorera Credentials. Mari yemubhadharo wekubhadhara chikumbiro i$60 uye haidzoserwe.
Vanyoreri vanofanira kuendesa gwaro ravo repamusoro kudhipatimendi rekubvumidzwa reElon University.
Vanyoreri vanofanirwa kuendesa yakapedzwa yechikoro bvunzo yemaitiro ekubvumidzwa.
Miedzo mhinduro SAT kana ACT
Chinyorwa chemunyoreri / zvinyorwa kubva kuchikoro chavo chesekondari nesekondari
Vanyoreri vanofanira kuendesa tsamba yebvunzo dzehunyanzvi hwechirungu kana Chirungu chisiri mutauro wavo wekutanga. Izvi zvinosanganisira TOEFL, IELTS, kana Duolingo English Exam Results.
Vadzidzi veElon University havafanirwe kutora bvunzo. Asi, rekodhi redzidzo (kusanganisira zvirongwa zvakapindwa, mamakisi akagamuchirwa, uye kumira kwekirasi), inoperekedzwa nerondedzero yemunhu, ndicho chinhu chakakosha mukuita kwekunyorera.
Edza kutarisa Georgia Tech Yekugamuchira Mwero uye Maitiro Ekupinda Zviri Nyore
Elon University Admission maitiro ekutamisa mudzidzi
Maitiro anotevera ndiwo anodiwa ekubvumidzwa kwevadzidzi vanochinjisa.
Vadzidzi vanofanirwa kuendesa yavo yakazadzikiswa uye isingadzoserwe muripo wekubhadhara mari yekunyorera Credentials. Mari yemubhadharo wekubhadhara chikumbiro i$60 uye haidzorerwe.
Vese madhipatimendi ekukoreji vakapinda vanofanira kuunza rondedzero.
Kuti uone kukodzera, zadza Fomu Rokuperera Kwemudzidzi.
Verified credentials kubva kune ese 2- uye 4 makoreji nemayunivhesiti
Kupinda kumakoreji/kumayunivhesiti kunodiwa.
Gwaro razvino rechikoro chesekondari rakasimbiswa
Iwe unofanirwa kuendesa zvinyoreso zvako naNdira 10th semunyori.
Kunyoresa kwechikoro kunosanganisira kubvunzurudza uye kunongowanikwa mukudonha.
Kana iwe wakanyoreswa ikozvino mumesita yako yekutanga uye wapedza mashoma egumi nemaviri semester maawa, unofanirwa kunyoresa seanotamiswa.
DZIMAI TARISA: Zvikoro Zvakanakisa Zvekurapa muFlorida [Pamusoro 12]
Chii chinonzi Elon University Tuition Fee?
Elon University's undergraduate tuition uye mubhadharo wegore rechikoro 2020-2021 $37,921. Undergraduate tuition uye mubhadharo unofungidzirwa kuva $39,321 yegore rechikoro 2021-2022.
Mari yedzidzo yepasiredhi muna 2021 yakawedzera ne3.69 muzana pamusoro pegore rapfuura. Mari yekugara yakawedzera 2.98 muzana gore pagore kune vese vari pa-campus uye kunze kwekambasi kugara. Yayo undergraduate tuition uye mubhadharo wakakwira kupfuura avhareji yenyika kumayunivhesiti akafanana
Tarisa Top 15 Best Film Zvikoro Munyika
Ndezvipi zvakanakira Kudzidza paElon University?
Elon University inzvimbo inoshamisa inotora kusununguka mukugadzira vadzidzi vepasirese vanoziva. Elon University inopa kutarisisa kwayo kuzere kuvadzidzi vayo vese. Vadzidzi vanopihwa mikana yakawanda yekusvika pakuziva nhengo dzefekisheni uye zvinopesana. Elon ane chiitiko chinopa mubairo zvakanyanya icho vadzidzi vanozomboita.
Iyo yakanaka kwazvo chikamu nezve Elon ndiyo yakawanda sarudzo dzekudzidza uye kusimudzira pachako. Mapurofesa anobatsira uye anofarira vadzidzi vanoshanda nesimba uye vanotora chikamu mukirasi. Zviitwa zvemushure mezvidzidzo zvakawanda, kubva kumapoka ezvidzidzo kusvika kumitambo yemakirabhu kusvika kumafambiro evanorwira magariro evanhu. Anenge zuva rega rega, kune zviitiko zvetsika apo vatauri vanobva kumativi ese enyika vanouya kuzotaura nezvezvinonetsa, pamwe nezvinhu zvinonakidza semakonzati nemitambo.
Vadzidzisi veElon University ndevamwe vevanhu vakangwara uye vanonakidza. Vakazvisimbisa mumabasa avo uye vane chido chekugovana zvavakadzidza mukirasi. Ivo vanowanzoda kushanda nevadzidzi uye kuita kuti vasvike kwavari.
Mukupedzisa, Elon University ine yakasarudzika maficha akadai se: yakanaka kambasi, inofadza mamiriro ekunze, uye vakanaka vadzidzi. Pane kusimbiswa kwakasimba kwekutora chikamu kwevadzidzi, pamwe nehukama hwepedyo nevarairidzi, kudzidza kunze kwenyika sarudzo, uye mikana yekudzidzira yakawanda. Hurongwa hwedzidzo hwakamisikidzwa nemakirasi mana-kiredhiti, izvo zvinokutendera kuti utore zvidzidzo zvishoma semesita yega yega uchiri kugara pahurongwa kuti upedze kudzidza nenguva.
Ko Elon koreji yakaoma kupinda?
Elon admissions inosarudza nechiyero chekugamuchira che72%. Vadzidzi vanopinda muElon vane avhareji yeSAT mamaki pakati pe1160-1320 kana avhareji ACT mamakisi e25-30. Nguva yekupedzisira yekunyorera Elon ndiNdira 10. Vadzidzi vanofarira vanogona kunyorera chiitiko chekutanga uye sarudzo yekutanga.
Titevere pa Instagram kuti uwane zvigadziriso paFully Funded Scholarship Opportunities muEurope neAmerica
Ndingapinda muElon University ndine 3.5 GPA?
Chikoro chako chepamusoro GPA chakanakira Elon University here? Avhareji yechikoro chepamusoro GPA yevadzidzi vanobvumirwa paElon University ndeye 3.98 pachiyero che 4.0.
Elon University chikoro chakanaka here?
Elon anoverengerwa neUS News & World Report se #83 National University, ine #1 chinzvimbo chekugona mukudzidzisa kwepasikiriduate uye #9 chinzvimbo cheYakanyanya Innovative National University.
Chii chinonzi Elon University inonyanya kuzivikanwa?
Vadetembi & Quants vanoisa Elon pakati penyika yepamusoro undergraduate bhizinesi, kushambadzira uye MBA zvirongwa. Magazini yeKiplinger's Personal Finance inodana Elon imwe yenyika yepamusoro-30 "yakanakisa kukosha" mayunivhesiti akazvimirira.
Ko Elon University inoita mabvunzurudzo?
Aiwa, seye 2021-22 yekubvumidzwa kutenderera, Elon haadi iyo GRE. Pane interview inodiwa here? Interviews zvinodikanwa kuti ubvume. Vanosvika zana nemakumi mashanu vevanonyanya kunyorera vanozokokwa kuzobvunzurudza nePA faculty.
VERENGA ZVIMWE: Yemahara Yakatenderwa High Chikoro Diploma Pamhepo yevakuru
Izvo zvirimo pane ino saiti zvakatumirwa zvine vavariro dzakanaka. Kana iwe uine izvi zvirimo uye uchitenda kuti yako copyright yakatyorwa kana kutyorwa, ita shuwa kuti utibata nesu ku [xscholarshipc (@) gmail (dot) com] uye zviito zvichatorwa nekukasira.
Uconn Kugamuchirwa Mwero uye Maitiro Ekupinda Zviri Nyore
The Top 15 Best Non-Ivy League Zvikoro
Ona Yedu Yezvino Posts
Bard College Kugamuchirwa Mwero uye Maitiro Ekupinda Zviri Nyore
10 Akanakisa Online Coding Bootcamp Muna 2022
Kuronga Rwendo Rwedzidzo Kunze Kwenyika. Zvaunofanira Kuziva.
Yakawanda Sei Coding Bootcamp Inodhura? | 2022
Mabasa eNhoroondo MaMajors muna 2022 | 10 Inonakidza Basa Sarudzo
© 2022 xScholarship • Yakavakwa ne GeneratePress